Teregiramu yatotibvumidza isu kuita yakavharidzirwa vhidhiyo mafoni | Linux Vakapindwa muropa
Teregiramu yatotibvumidza isu kuita yakavharidzirwa vhidhiyo kufona pane mobiles uye yayo desktop desktop
Kwemakore mazhinji, iyo inonyanya kufarirwa kunyorera yekugadzira vhidhiyo mafoni yaive Skype. Muchokwadi, ini ndingati zvinoramba zvichidaro, kana zvakadaro zvinoratidzika kunyangwe mune akateedzana nemamuvhi, chimwe chinhu icho kushambadzira kungave nacho chekuita. Asi chokwadi ndechekuti vhidhiyo yekufona haisati yambove yakachengeteka kwazvo, uye nekuda kwechikonzero ichocho teregiramu akaenda kubasa kunopa chinhu chakatopihwa neWhatsApp, asi zvirinani.
Musi waAugust 14, timu yevagadziri veyakakurumbira mameseji app yakaparura akati wandei vhezheni yeapp yayo, yakakosha kuve iyo 7.0 inowanikwa paIOS uye Android, ine mukana wekuita mavhidhiyo ekufona. En chiziviso, Vakanyevera kuti basa racho raizosvika pakutanga pa Android, nekuti Apple inotora nguva yakareba kuti iongorore maapplication uye ivo vanga vasati vasvika nenguva (zvinoita sekunge havasi kuseka). Kune rimwe divi, uye chii chingafadze vaverengi vedu zvakanyanya, ivo vakaburitsa Telegraph 2.3 yedesktop, ine shanduko zhinji kubvira v2.0 uye mune runyorwa rwezvinhu zvitsva chete "Vhidhiyo mafoni (alpha vhezheni)" inoverengwa.
Kana iwe ukashandisa Teregiramu paLinux, tinokurudzira kuti iwe uite iyi shanduko mune yayo yazvino vhezheni
Vhidhiyo mafoni anouya kuTeregiramu, asi mune alpha vhezheni
Ndashandisa shanduro dzinoverengeka, ndinofunga kuti panguva ino zvese zvinovhiringidza, chimwe chinhu chakajairika uchifunga kuti ivo vachiri mukati alpha chikamu. Pamafoni nhare, pane vashandisi vasingaone sarudzo ye "vhidhiyo" kunyangwe ivo vakagadzirisa uye vachitoita vhidhiyo yekufona, asi vhidhiyo icon inoonekwa kana tikapinda chikamu chedu chekutaurirana. Kana isu tiri pane desktop desktop, isu tinofanirwa kuyeuka kuti ndizvo Telegraph 2.3, inowanikwawo, asi isu tinofanirwa kubata icon yefoni uye, panguva yekufona, tinya bhatani revhidhiyo (ona musoro wekutora) kuburitsa mufananidzo weiyo kamera inotora.
Panguva yekunyora, chimiro chinenge chiripo muWindows vhezheni yeTeregiramu, asi Linux haisati yagadziridzwa, kana zvirinani Flathub's, saka isu hatigone kufonera vhidhiyo kunze kwekunge isu tora pasi iyo binary vhezheni, inowanikwa pa Iyi link. Hapana chakafanana chinowanikwa muwebhu vhezheni futi, asi ivo vangangodaro vakamirira padanho repamberi kuisa iro nyowani basa zvakare rekushandisa mubrowser.
Ini pachangu, semushandisi asingavimbi nemhando yeWhatsApp zvakanyanya uye asingashandise chero imwe meseji app, izvi zvinoita senge inhau yakanaka kwazvo kwandiri. Kufanana neni, urikufunga kushandisa Teregiramu seyakavimbika vhidhiyo yekufona app?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Teregiramu yatotibvumidza isu kuita yakavharidzirwa vhidhiyo kufona pane mobiles uye yayo desktop desktop
Ehe, ndiri kuzvifunga nekuti ndiri kuchinja ese masevhisi andakashandisa kubva kumakambani eAmerica asingaremekedze European data yekudzivirira data (WhatsApp, Google, nezvimwe ...) kune vamwe vakaita seGMX yeemail, Teregiramu yekutaura, Vivaldi seye browser ine maseva muIceland, nezvimwe ...
Zvichakadaro panguva ino muvhi, ini handinzwisise kuti avo vedu vanoshandisa Signal seyakagadziriswa application vari mune vashoma.
Ini ndinorishandisa seyese mameseji app, yesms, vhidhiyo kufona, zvemunhu zvinyorwa uye nezve zvese zvinouya mupfungwa.
Ini ndinokurudzira munhu wese anoverenga chirevo ichi kuti aongorore Signal, mune kodhi yayo kana vaine ruzivo nezvayo, mune yayo encryption iyo bhenji uye kutora nhanho nekuitora nekuti mumaonero angu hapana chimwe chiripo chinoipfuura pasina kumonyanisa kuyerera kwedata.
Mhoro, Merovingian. Ini ndinokuudza maonero angu: mameseji ekunyorera haana kuita sisitimu yekushandisa yaunogona kushandisa wega pakombuta yako; isu tinotora, tinoisa Ubuntu kana Arch Linux uye kushanda nezvinoita zvakanyanya kushanda. Kutumira mameseji maapplication ndeyekutaurirana nevamwe vanhu. Isu tese tinoziva kuti Chiratidzo chikumbiro chakanaka, asi mubvunzo wandichabvunza iwe unogona kubvunzwa nemamirioni evashandisi: ndiani wandinozoshandisa Signal naani? Chaizvoizvo HAPANA mumwe wevandinoshamwaridzana navo anoshandisa Signal. Muchokwadi, ingangoita gumi chete inoshandisa Teregiramu, uye yakanyanya kuwanda. Pakupedzisira tinofanirwa kupedzisira tatumira mameseji izvo vanhu vanopfeka. Ini ndinoshandisa Teregiramu zvakanyanya sekutaura app uye maturusi senge bots pane kubata shamwari dzangu kana mhuri.
Uye ini ndinokuudza, ini ndakaedza kuita kuti vanhu vachinje kwemakore mazhinji, angangoita masere, kutanga neLine, Teregiramu kana kunyange Viber, iyo yaive nemafoni uye mameseji apo WhatsApp yaingova neyakamboita, kuwedzera kune desktop desktop. Vanhu havadi kuchinja, uye pakupedzisira, kuva neapp uye kuishandisa ne8 kana 1, zvakanaka isu zvirinani kupfuudza iyo 2 kana 1 kune izvo zvatakatoshandisa nekukanganwa. Zvirinani mune yangu kesi, ini ndaneta nekuve kumashure kweGORE vanhu. Imwe sarudzo ndeyekubvisa mamwe maapplication, asi kubhadhara kubhadhara mameseji kana kusaonana nevanozivana navo.
Ndanga ndichishandisa Teregiramu kwemakore mashanu, ndakaona shanduko uye inondinakidza !!!!!
Polar: maneja wemabooks, maPDF uye ... offline web browser?
Akraino: chii ichi chakavhurwa sosi chirongwa?